ဘယ်လို Translate ဖို့စပိန်ဖို့ "အဖြစ်"
စပိန်မှ '' အဖြစ် '' ဘာသာ
အဆိုပါနည်းလမ်းများစွာအတွက်စပိန်မှဘာသာပြန်နိုင်ပါတယ် "အဖြစ်" စကားလုံး - ဖြစ်ကောင်းများစွာနှင့်သင်မကြာခဏအခြားအဘို့ထိုသူတို့ထဲကတစ်ခုအစားထိုးလို့မရပါဘူး။
စပိန်ဖို့ "အဖြစ်" ဘာသာပြန်ဆိုရန်လှည့်ကွက်မကြာခဏကအတွက်လည်ပတ်သောဘယ်လိုထွက်ရှာဖွေမှပမာဏသည် ဝါကျ နှင့်အတူတူပင်စိတ်ကူးဖော်ပြတဲ့နေရာမှာမတူညီတဲ့လမ်းအတူတက်လာမယ့်။ အောက်ပါအသုံးပြုထားသောနိုင်ပါတယ် "အဖြစ်" ဟုအဆိုပါနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ဦးပြည့်စုံစာရင်းမပေးပေမယ့်ကအသုံးအများဆုံးပါဝင်သည်:
တန်းတူရေး၏နှိုင်းယှဉ်ခုနှစ်တွင်: အင်္ဂလိပ်လို "အဖြစ်" ၏အသုံးအများဆုံးအသုံးပြုမှုတစ်ခုမှာအရာနှစ်ခုသို့မဟုတ်လုပ်ရပ်များတန်းတူဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြရန်အားလုံး၌တည်ရှိ၏။ ထိုသို့သော တန်းတူညီမျှမှု၏နှိုင်းယှဉ် ပုံမှန်အားဖြင့်အဆိုပါရှိရာထားသောစာပိုဒ်တိုများ "tan ... como" (ပုဘဲဥပုံတစ်ခုနာမဝိသေသနသို့မဟုတ် adverb ကိုယ်စားပြုရှိရာ) သို့မဟုတ် "tanto ... como" (ကိုအသုံးပြုပြီးလုပ်နေကြတယ် ဘဲဥပုံ ဟာကိုက်ညီဖို့ form မှာနာမ်နဲ့ tanto အပြောင်းအလဲများကိုကိုယ်စားပြု နံပါတ်နှင့်ကျားမအတွက်နာမ်) ။
ဘဝမှာငါကယနေ့ဖြစ်ကြောင်းကိုသကဲ့သို့ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြဘူး။ Nunca en မိုင် vida habíaဆီဒို tan como hoy feliz ။
ငါသည်လည်းအဖြစ် crazily ကလေးတစ်ဦးအဘို့အဖြစ်နိုင်သမျှသည်အတိုင်း, ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးဆရာမနှင့်အတူမေတ္တာ၌ကျဆင်းခဲ့သည်။ Yo tambiénငါ့ကိုenamoréက de mi primera maestra, tan locamente como es posible en un niño။
သင်အလိုရှိသကဲ့သို့သင်တို့သလောက်ငွေရှာနိုင်ပါတယ်။ usted Podrías ganar tanto dinero como quieras ။
ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုနှင့်အတူ "အဖြစ်" ကိုမကြာခဏ "ဘယ်လို။ " ဒီထက်မကြာခဏ, "ကဲ့သို့" နဲ့အစားထိုးသို့မဟုတ်နိုင်ပါသည်အလွတ်သဘောအင်္ဂလိပ်မှာတော့: "သောလမ်းများတွင်" ကိုဆိုလိုတာမှ Como မကြာခဏဘာသာပြန်ချက်အဖြစ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
ငါထင်သကဲ့သို့သင်တို့ထင်လျှင်သိရန် llike လိမ့်မယ်။ ငါ့ကို gustaria ဖုံးကိုဓားရှည် si piensas como pienso ။
ထိုသို့ကြောင့်ချန်ထားပါ။ Déjalo como está။
သင်တို့ရှိသမျှကိုသိသကဲ့သို့, အစီအစဉ်အပေါ်ပထမဦးဆုံးကို item သမ္မတ၏ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ Como saben todo ustedes, el primer punto del del DIA es la elección del presidente orden ။
ငါဟုခဲ့သည်နှင့်အမျှအရာအားလုံးစုံလင်ခြင်းရှိ၏။ Como iba diciendo, todo ခေတ် perfecto ။
ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်သွားလျှင်သူကစားတတ်၏။ Come como si fuera တစ် SER su última vez ။
"ဘာလို့လဲဆိုတော့" ဆိုလိုရန်: ပေါ်မှာငါတို့သင်ခန်းစာရှင်းပြအဖြစ် "causation ဖော်ပြရန်အသုံးပြုသည့်အခါ", "ဘာသာပြန်ထားသောနိုင်ပါတယ်အဖြစ် causation :
သူကရေငတ်ဖြစ်သကဲ့သို့ထိုသူသည်ရေကိုရှာဖွေနေခဲ့သည်။ Buscaba ဂီ porque tenía sed ။
ငါမဆိုပိုက်ဆံရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါသကဲ့သို့ငါကားမဝယ်နိုင်ဘူး။ Como yo မျှtenía dinero မရှိ pude comprar el coche ။
"အနေဖြင့်" သို့မဟုတ် "သောအခါ" ကိုဆိုလိုတာရန်: Mientras (နှင့်တခါတရံ cuando) များသောအားဖြင့်တစ်ပြိုင်နက်လုပ်ရပ်များညွှန်ပြရန်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်:
သူကလေ့လာနေခဲ့ပါတယ်အဖြစ်သူက CNN watched ။ Mientras estudiaba veía la က CNN ။
ကျွန်တော်အစာစားခြင်းခံခဲ့ရသည်အဖြစ်ငါရှိခဲ့ကြသည်ကိုအားလုံးကပြောပြရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ Mientras comíamos, decidídecírseloတစ် todo los Que estábamosမဟာမိတ်များ။
တစ်အခန်းကဏ္ဍသို့မဟုတ်အနေအထားကိုရည်ညွှန်းရန်: တစ်ခု adverbial ထားသောစာပိုဒ်တိုများမိတ်ဆက် "အဖြစ်" သောအခါ, မကြာခဏ como သုံးပြီးဘာသာပြန်ထားသောနိုင်ပါတယ်:
သူကညဉ့်အခါသူခိုးကဲ့သို့သွားလာ။ Anda como en la noche ladrón။
ဒါဟာလူငယ်တစ်အနုပညာရှင်အဖြစ်ယောန၏ပုံတူဖြစ်ပါတယ်။ es retrato က de ယောန como joven artista ။
ဂျပန်နှုတ်ကပတ်တော်ကို Raku Learn
"Paraître" (ပုံပေါက်တယ်မှ) ၏ရိုးရှင်းသော conjugation Learn
ဂျပန် Shizuka ၏အဓိပ္ပာယ်ကို
ဂျပန်ကောင်းမွန်သောည (Oyasuminasai) ဆိုရမည်လုပ်နည်း
အီတလီတွင်ကျွမ်းကျင်ဖြစ်လာ5Techniques
Tenir le အာဏာသိမ်းမှု
Bleiben (နေပါရန်) ဂျာမန်ကြိယာ conjugation
ကာမဲန် Winstead ၏မြို့ပြဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများအကြောင်းအမှန်တရား
ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာက de trabajo က y los casos en los Que aplican က de Tipos
အမေရိကားရဲ့ပထမဦးစွာ Ladies: မာသဝါရှင်တန် မှစ. ယနေ့တှငျမှ
အဆိုပါ Iliad ၏ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာ: အဆိုပါ Mycenaean ယဉ်ကျေးမှု
စပိန် preposition ရှေ့ဆက်ဖို့နိဒါန်း
တစ်ဦး COB အိမ်ကဘာလဲ? ရိုးရှင်းသောကမ္ဘာမြေဗိသုကာပညာ
သင်၏အဆီဖိအား Regulator ကိုစုံစမ်းရန်နှင့်စုံစမ်းလုပ်နည်း
အဆိုပါအင်အားစုငါ့ကိုနှိုး: အ Movie, ထဲမှာမဖြစ်ကြကြောင်း 10 ဗျာဒိတ်ကျမ်း
ဂေါက် Play မှတောင်းဆိုနေတဲ့ဂေါက်ဖိနပ်ဖြစ်ပါသလား
Jon Favreau, Vince Vaughn & ပတေရုသ Billingsley: သူငယ်ချင်းများ & မကြာခဏပူပေါင်းဆောင်ရွက်
စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သော၏ Tariff (1828)
သိပ္ပံအမည်များအမျိုးအစားအားဖြင့် - အဆိုပါအင်းဆက်ပိုးအညွှန်း
"ပြိုင်ပွဲအစင်းကျား" အကွောငျး Frankie Muniz ဆွေးနွေးပွဲ
ခရစ် Tomlin သီချင်းများ